Muqdisho oo tababar looga furay Ciidamo ka mid noqonaya Daraawiishta Soomaaliya:- (Sawiro) - Awdinle Online
Muqdisho oo tababar looga furay Ciidamo ka mid noqonaya Daraawiishta Soomaaliya:- (Sawiro)
January 7, 2020 (Awdinle Online) –Ugu yaraan 300 oo Askari kana mid noqonaya Daraawiishta Soomaaliya ayaa tababar waxaa uu uga furmay Xarunta Booliska ee Jeneraal Kaahiye ee Magaalada Muqdisho.
Ciidamadan oo ka mid noqonaya Booliska Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ay ka koobanyihiin qeybaha kala ah, Daraawiishta, Birmadka iyo Haramcad oo dhamaataantood hoostaga Dowlada Faderaalka Soomaaliya.
Taliyaha Booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo hadal kooban ka jeediyay furitaanka tababarkaan ayaa sheegay Ciidamadan in ay baran doonaan tababar gaar ah, dhamaadka tababarkana si wanaagsan loo qalabeyn doono sida uu sheegay.
“Dhammaadka tababarkan ciidamadeenna gaarka ee booliska oo ay kamid yihiin Haramcad, Daraawiishta iyo Birmad waxay noqon doonaan kuwa si buuxda u qalabeysan, xoogooda oo la isku geeyana wuxu noqon doonaa mid awooda inuu sugo xarumaha bulshada” Tayuu yiri Janaraal Xijaar.
Taliyaha Booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo hadal kooban ka jeediyay furitaanka.
Mashuurca Tababarkan oo shan sanadood ah ayaa waxaa maalgelinaya Midowga Yurub, Dowladda Soomaaliya ayaa hoggaamineysa halka tababarka ay bixnayaan Saraakiil ka socda AMISOM, Qaramada Midoobey iyo Midowga Yurub.
Dowladda Soomaaliya ayaa sare u qaadday qorashada Ciidamada Daraawiishta ah,waxaana ay socon doontaa Sanadkan 2020ka oo dhan.
Augustine Magnus Kailie, oo ah Taliyaha Booliska AMISOM ee Soomaaliya ayaa sheegay in tababarkan uu sare u qaadayo awoodda Ciidanka Soomaaliya oo laga doonayo in ay daafacaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
“Maaddaama aan halkan u imaanay inaan caawino, dhisno awoodaada, sidoo kale waa inaad diyaar u ahaataan inaad u gaartaan sida ugu fiican ee aad uga qaadan kartaan khibradaha kala duwan iyo taageerada aad heli doontaan gaar ahaan Daraawiishta, waxaad u istaagi doontaan inaad difaacdaan dadka Soomaaliyeed, “ ayuu yiri taliiyaha boliska AMISOM Augustine Magnus.
Augustine Magnus Kailie, Taliyaha Booliska AMISOM ee Soomaaliya
Taliyaha Booliska Qaramada Midoobey ee jooga Soomaaliya Meinolf Schlotmann, ayaa ugu baaqay Ciidanka tababarka loo furay in ay hab kooxeed u shaqeeyaan si ay guul uga gaaraan hadafka ay leeyihiin.
“Haddii aan idin siin karo hal talo oo keliya, u shaqeeya koox ahaan taas ayaa idiin horseedi karta guulaha, haddii aad koox ahaan u shaqeysaan, wax soo saarkiinu wuxuu noqon doonaa mid guul ballaaran xambaarsan oo aad ugu adeegto bulshadaada, ” Taliyaha booliska QM Meinolf ayaa hadkiisa ku soo xiray.
Taliyaha Booliska Qaramada Midoobey ee jooga Soomaaliya Meinolf Schlotmann.
Marka tababarka uu u dhamaado Ciidamadan waxaa lagu dhafi doonaa Booliska Soomaaliya,waxaana loo daabulayaa dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah dowldda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Previous articleDhageyso :-Senator Muuse Suudi oo ka digay in shirkado shisheeye loo ogolaado soo saarista Batroolka
Next articleCiidamada NISA oo gudaha u galay deeganka Barujeed ee gobolka Galgaduud